उपनिर्वाचन कस्ले जित्यो कस्ले हा-यो ? - NepalDut NepalDut
उपनिर्वाचन कस्ले जित्यो कस्ले हा-यो ?
नेपालमा प्रजातन्त्र नामको ब्यवस्था आए पछि सबभन्दा पहिलो चुनाव २०१० सालमा भएको काठकण्डौ नगरको हो । त्यस पछि२०१५सालमा आम निर्वाचन भयो जस्मा नेपाली काग्रेसले दुईतिहाइ मत पाएको थियो । दुईतिहाइको सरकारलाई राजाले दुईवर्ष भित्रनै अपध्वस्त गरे काग्रेसले पुरै हा-यो । पञ्चायत कालभर पनि चुनाव हुँदै गए । पञ्चायत पछि राजतन्त्रात्मक संसदीय ब्यवस्थामा पनि चुनावहरू भए जित हारको क्रम चलिरह्य ।हालको लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमा पनि यो क्रम यथावत छ । नेपालमा राजतन्त्र छदासम्म राज्य सन्चालन गर्न सन्त महन्त (जो सकमजबाट बिरक्त) गुरु परोहित (जस्ले पुरातन ब्यबस्था र भाग्यबादमा बिश्वस राख्दथे ) साहु महाजन ( जस्ले जनतालाई प्रत्यक्ष शोषण गर्दथे ) भाइ भारदार ( जस्ले श्रमनै नगरि राज्यकोषबाट ठूलो रकम खान्कीका रूपमा पाउथे) र अन्य भद्रभलाद्मि भनिनेहरू देशभर छरिएर जनतामा पत्पीडन गर्दथे राजाले यिनीहरूको सल्लाहामा राज्य सञ्चालन गर्दथे । यस्तो परिपाटी भएको संसदीय ब्यवस्थालाई विश्बकै उत्कृष्टब्यबस्था देख्ने काग्रेस एमाले लगायतका संसदीय पार्टीहरू थिए । राजाको राज्यभिशेक गुरूपुरोहिते गर्दथे काग्रेस एमालेहरूले सत्तापक्ष बिपक्षका नाममा राजाका चरणमा दाम राखेर दासत्व स्वीकार गर्नु पर्दथ्यो । राजाले चाहे संसदनै भङ्ग गर्न सक्थे ।
यस्तो पुरानो उत्पीडक राज्ययन्त्रको स्थानमा नयाँ किसिमको राजनीतिक राज्ययन्त्र सिर्जना गर्न, पुरानो नोकरशाही कर्मचारीतन्त्रको उन्मूलन गरेर नयाँ कर्मचारी संयन्त्र निर्माण गर्न, धर्मलाई राज्यबाट अलग गर्न , शिक्षा स्वस्थ्य जस्ता जनसरोकारका बिषयहरूलाई राज्य अन्तरगत ल्यउन, क्रान्तिकारी भूमिसुधार ल्याउन, सामन्तवाद साम्राज्यवाद नवउपनिबेशिकवादबाट जनतालाई मुक्तगरी स्वधिन जनगणतन्त्रात्मक राज्य ब्यबस्थाकालागि माओवादी जनयुध्द भएको थियो । पुरानो ब्यवस्था यथावत राख्न चाहने राजा काग्रेस एमाले लगायतका पुरातनपन्थीहरू एकतर्फ र आमूलपरिवर्तन चाहने माओवादी अर्कोतर्फ भै दशवर्ष जनयुध्द भयो । यसले राजतन्त्रलाई अपध्वष्त गर्न त सफल भयो तर जनगणतन्त्रमा जान सकेन ।
काग्रेस डवल नेकपा जसले जिते पनि दलालपुँजीवादीका प्रतिनिधिले जित्ने हो जनतालाई पहिला जस्तो थियो त्यो भन्दा फरक केही हुने होइन।
माओवादी जनयुध्दको मूख्य नेतृत्व लगायतको माओवादीको ठूलो हिस्सा दलालपूजीवादमा पतन भयो । ।नेपालको राज्य पहिला भारत लगायतका साम्राज्यवादीहरूको निर्देशनमा पुरातनवादीहरूले चलाऊथे अहिले दलालहरूले चलाऊदछन् । बिगतमा जस्तैः अहिले पनि शान्तिपूर्ण रूपमा बैज्ञानिक समाजवादको प्रचारप्रसारमा प्रतिबन्ध छ । धर्म घिमिरे कुमार पौडेल जस्ता क्रान्तिकारीहरूले झुट्टा मुडभेडका नाममा अझै ज्यन गुमाइ रहेका छन् । मार्क्सले भने जस्तो यस्तो संसदीय निर्वाचनले पाँच वर्षमा एक पटक जनसमुदायले सत्तारूढ बर्गको कुन सदस्यले जनताको दमन गर्ने हो र संसदमा उसको प्रतिनिधित्व गर्ने हो भन्ने निर्णय गर्दछन् यो निर्वाचन यो भन्दा फरक केही होइन काग्रेस डवल नेकपा जसले जिते पनि दलालपुँजीवादीका प्रतिनिधिले जित्ने हो जनतालाई पहिला जस्तो थियो त्यो भन्दा फरक केही हुने होइन। जनताले मरू भूमिमा मृगले पानी खोजे जसरी असल ब्यवस्था र नेतृत्व खोजी रहेका छन् ।
जनताकालागि संसदीय ब्यवस्था मरूभूमि भन्दा केही होइन यसैमा सुखी नेपाल समृध्द नेपाल खोज्नु मृगमरिचिका मात्र हो ।।अहिले नै जनताले कतै १६,कतै ५०,५५ प्रतिशत मात्र मतदान गरे । जित्नेले पाँच प्रतिशत देखि बीस बाईस प्रतिसतले जितेका छन् । जनता सदै मृगमरिचिकामा रहदैनन् चाँडैनै बैज्ञानिक समाजवादको मुहानमा गएर आफ्ना आवस्यकताहरू पूरा गर्नेछन् । पुरानै उत्पीडन दमन नातावाद कृपावाद भ्रष्टाचार भित्र तिमीहरूको स्वर्ग सदै रहने छैन अहिले जनताले हारेका छन् दलालपुँजीवादीले जितेका छन् । अब छिट्टै जनताले जित्नेछन् हार प्रतिक्रियावादीको नै हुनेछ ।